Daabacaadda Buug-yaraha Shiinaha ee Jaban oo Soosaara leh Soo-saare Soo-saare Bilis oo Saami leh iyo Alaab-qeybiye | Daabacaadda Aqoonta
Ku soo dhowow Aqoon Daabacaadda!
Khaanadaha Dharka & Wig
Sanduuqyada Ivory Cardboodhka
Daabacaadda Buugaagta Hardcover
Daabacaadda Buuggaagta ee Maqaarka
Daabacaadda Buugaagta Qurxinta
Daabacaadda Midabaynta Buugaagta
Waraaqaha / Waraaqaha / Faylka / Faylka / Boodhadhka
Xaashiyaha / Kaararka
Waraaqdo isku laaban
Xaashida / Boosta
Kaararka Flash Waxbarashada
Alaabada la Sameeyay
Alaabooyinka U Diyaar Garowga Maraakiibta
Adeegga daabacaadda xaashida xaashida ee Macaamiisha ah
Adeegga daabacaadda sanduuqa Buugga Macaamiisha ee Shiinaha
Daabacaadda Buug-yaraha Jumladda ah oo Jaban oo leh Xaraash dhammaystiran
Daabacaadda Guud ee A4 Magazine Daabacaadda
Caruurta Hardcover Buugaagta oo daabacan Madaxa iyo Duub ...
Daabacaadda Midabaynta Buuggaagta ee Dadka Waaweyn (Customer Doodling Printing Booking Printing)
Magaca badeecada: daabacaadda buugga jumladaha jumladda ah oo rakhiis ah oo leh adkayn dhammaystiran
Cabbirka iyo qaabeynta: waa la dejin karaa
Qalabka: warqad isku-xidhan, warqad farshaxan, warqad-daabacan
Dhamaadka dusha sare: xaraashka matte, dillaaca dhalaalaya
Qiimaha qeybta: usd1.5-usd10
Asal ahaan: Qingdao, Shiinaha
Dekadda FOB: Tianjin, Qingdao, Shanghai, iwm
MOQ: 100 nuqul oo ah nidaamka caadooyinka
Adeegsiga awoodaha ugu sareeya, buug-yarahaaga daabacan wuxuu u muuqan doonaa mid cajiib ah, wuxuu dareemayaa hodan, waana inuu soo jiito dhagaystayaashaada.
Dooro halbeegyadayada 100 rodol. Buuggu waa 100 rodol ama ka badan. Dabool culeyska.
Qiimayaasha lagu soo daray buugyarahaaga
Midab buuxa daabicid
Daabacaada hal ama labalaab
Rinjiga biyaha dhalaalaya ee dhalaalaya
Fidinta - ka xulo noocyo badan oo laab laabasho caan ah
Caddayn bilaash ah qaab PDF ah
Aasaasaha shirkadeena waa Wang Shumin.
Warshaddeenna waxaa la aasaasay sanadkii 2000 run ahaantii, laakiin ma lihin magac shirkadeed wakhtigaas, kaliya inaan kulano baahida ganacsiga ee maxalliga ah. Intaa waxaa sii dheer, suuqayagu wuxuu ku sugnaa guriga. Kaliya waxaan sameynay qaar ka mid ah alaabada OEM aana galin suuq caalami ah.
Sannadkii 2012, amarradeenna ayaa sii kordhay, sidaa darteed waxaan u baahan nahay inaan soo iibsano qalabyo badan oo aan u gudubno aqoon-isweydaarsi weyn.Haddaba, waxaan iska diiwaangelinay shirkad noo gaar ah - Qingdao Shuying Commercial Trading Co., Ltd. Sanadkii 2017, iyadoo la horumarinaayo baakaynta. warshadaha, waxaan u baahanahay inaan diiwaangelino calaamadaha calaamadaha badan, cilmi baaris iyo horumarinno tikniyoolajiyad dheeri ah, sidaa darteed waxaan aasaasnay ​​Qingdao Aqoonta Daabacaadda Co., Ltd., oo loogu talagalay gaar ahaan xaashiyaha waraaqaha iyo daabacaadda alaabada.
Waxyaabaha ugu waa weyni waa sanaadiiqda, bacaha waraaqaha, buugaagta, kaararka salaanta, iwm. Warshadeena waxay ku taalaa Jimo, Qingdao waxayna leedahay qibrad wax soo saar hodan ah oo ka sareysa 16years.Waxaan wadashaqeyn dheer oo iskaashi la leh guryaha daabacaada maxalliga ah iyo shirkadaha hadhuudhka & saliida.
Waxaan leenahay mashiinno daabacan oo noo gaar ah, tikniyoolajiyayaal, kormeerayaal tayo leh iyo shaqaale. Laga bilaabo sanadka 2018, waxaan bilownaa ganacsi dibedda ah, maxaa yeelay waxaan soo uruurinay khibrad hodan ah habka gaarsiinta, tayada & gaarsiinta waqtiga iyo habka dhoofinta, intaas oo dhan, waxaan bixin karnaa faa iido badan. Qiimaha warshadan.
Hadafkayaga ah horumarinta guryaha guriga waa inaan ugu adeegno faceenkeena si wanaagsan alaabada wanaagsan.
Hadafkayaga horumarinta suuqyada dibedda waa inaan ka hadalno alaabada laga sameeyay Shiinaha.
Haddii aad aragto wax khasaare ah ka dib markii alaabada la helo, waxaad ka qaadi kartaa sawirro iyo fiidyowyo aad na tusto. Haddii ay tahay masuuliyadeena, waxaan ku siin karnaa magdhow si ku habboon.
Hore: Daabacaadda Guud ee A4 Magazine Daabacaadda
Xiga: Kaararka Caadiga ah ee Waxbarista Flash Kaarka leh Pp Ring
Daabacaha Alarlar A2 Oo Daabacaad Lagu daabacay Shiinaha
Telefoonka gacanta: 18561833685
Cinwaanka: RM1604, Hengtai Mansion, No.127 Liaoning Rd, Degmada Shibei, Qingdao China 266012
Isniin - Jimce: 09AM to 06 PM
Sabti - Cadceed: 09AM to 06 PM